Ndezvipi zvakanakira uye kukosha kwegore desktop desktop system? - Nhau - Shenzhen VisionVision Technology Co LTD
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Ndezvipi zvakanakira uye kukosha kwegore desktop desktop system?
Ndezvipi zvakanakira uye kukosha kwegore desktop desktop system?
iye anonyanya kukosha mukana weiyo desktop desktop system ndeyekuti basa rayo pakati pekuchengetedzwa kwedata uye kuvanzika rakakurumbira. Kudzivirirwa uye kudzikama zvakanyanyisa coefficients.
1. Dhata inochengetwa mugore repakati; iyo data inochengetwa mu scheduler, iyo inonyatso gadzirisa dambudziko rekurasikirwa kwedata kunokonzerwa nekomputa kutadza kana kukuvara pasina kunetseka nezve komputa kutadza kana kukuvara.
2. otomatiki negadziriro yeparutivi; inogadzirisa dambudziko rekuchengetedza data zvakanyanya. Otomatiki data backup inoita basa rakanaka mukudzivirira iyo yakazara data yeiyo bhizinesi. Pasi pekudzivirirwa kwema hard disk akawanda, mutongi anogona kuva inoitwa mune yakatsiga mamiriro.
3. Kudzivirirwa apo gore komputa desktop rinokundikana. Paunenge uchishanda neiyo desktop gore system, iyo data haizonyangarika kana chiitiko chisingatarisirwe inokonzera kudzimwa kwemagetsi kana bhuruu screen. Iwe unongoda kutanga kana kushandura gore terminal yekuenderera mberi nekushanda.
4. Kana hurongwa hwacho hwamhanya, inoshandisa magetsi eSP. Kunyangwe mushure me kutadza kwesimba kusingatarisirwi, inogona kuvimba neanoronga gore kuti isamiswe magetsi. Iine akawanda akaomarara dhisiki data backup, kunyangwe kana iri hard disk iri yakakuvara, iyo data haizorasike.
5. Chiteshi chinogona kudzorwa zvinoenderana nezvinodiwa ne mutengi kambani. Kunyangwe yakaremara zvachose kana kuvhurika, inofanirwa kuve iri mvumo nebhizinesi. Kudzora kwakazara kweUSB, serial port, yakafanana port, infrared, nezvimwe zvinogona kunyatsotevedzera iyo kambani. Dhata yakaburitswa.
6. Cloud anti-virus chikuva, iyo general system ichatambura zvakanyanya kurasikirwa kana uchinge wasangana nemavhairasi. Iyo gore desktop desktop ine super anti-virus mashandiro uye tekinoroji yepamusoro kwazvo yekuchengetedza system kubva kukuvara.
7. Mambure acho akanyatsogadzika ari ega. Iko nekunze kweiyo hofisi yakaparadzaniswa zvachose kubva kunze. Iyo yemukati network inonyanya yaishandiswa kugadzirisa hofisi data, ichinyatso kuburitsa iyo faira kubva kunze nyika.
8. Zvinyorwa zvakagadziriswa zvekutungamira, akasiyana matanho evashandi, iyo chiremera chakasiyana chakasiyana, ruzivo rwe data rwunonyanya kuita kuronga nekushandisa.
Yapfuura:Ndezvipi zvakanaka zvekubata zvese-mu-one?
Tevere:Mushandisi gwaro revose-mu-kamwe makomputa